အောင်မြင်တဲ့ပင်နယ်တီကန်သွင်းမှုတွေရဲ့ နောက်ကွယ်ကလျှို့ဝှက်ချက်ကို ပြောပြလိုက်တဲ့ #ဟယ်ရီကိန်း - SPORTS MYANMAR
အောင်မြင်တဲ့ပင်နယ်တီကန်သွင်းမှုတွေရဲ့ နောက်ကွယ်ကလျှို့ဝှက်ချက်ကို ပြောပြလိုက်တဲ့ #ဟယ်ရီကိန်း
ဝင်ဘာလေ မှာ ကစားသွားခဲ့တဲ့ ယူရို ၂၀၂၀ ခြေစစ်ပွဲစဉ် မှာ အင်္ဂလန် အသင်းက ဘူလ်ဂေးရီးယား အသင်းကို ၄-၀ ဂိုးနဲ့ အနိုင်ယူပြီး အမှတ်ပေးဇယားကို ဆက်လက် ဦးဆောင်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲမှာ အထူးခြေစွမ်းပြခဲ့တာကတော့ တိုက်စစ်မှူး ဟယ်ရီကိန်းဖြစ်ပြီး ကိုယ်တိုင် ဟတ်ထရစ်သွင်းယူနိုင်ခဲ့သလို စတာလင်ရဲ့ဂိုးကိုလည်းဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
England’s striker Harry Kane (R) celebrates scoring his team’s fourth goal, from the penalty spot, and his hatrick, during the UEFA Euro 2020 qualifying first round Group A football match between England and Bulgaria at Wembley Stadium in London on September 7, 2019. (Photo by Ian KINGTON / AFP) / NOT FOR MARKETING OR ADVERTISING USE / RESTRICTED TO EDITORIAL USE
အင်္ဂလန် အသင်းဟာ အုပ်စုတွင်း ပွဲစဉ် ၃ပွဲအပြီးမှာ ရာနှုန်းပြည့် အနိုင်ရရှိထားခဲ့လို့ လည်း ခြေစစ်ပွဲအောင်မြင်ဖို့ အတော်လေးကို အခြေအနေကောင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဟယ်ရီကိန်းဟာ အခုပွဲစဉ်မှာ သွင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့ဂိုးတွေကြောင့် နိုင်ငံအသင်းအတွက် သွင်းဂိုး၂၅ဂိုးအထိရှိလာခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အခုပွဲကသူ့ရဲ့ သွင်းဂိုးတွေပင်နယ်တီသွင်းဂိုး ၂ဂိုးအထိပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကိန်းအတွက် တော့ အင်္ဂလန်အတွက် နောက်ဆုံး ပင်နယ်တီ ၈ကြိမ်လုံးကို အဖိတ်အစင် မရှိအောင်အသုံးချထားနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလန်ကစားသမားတွေဟာ အတိတ်ကာလတွေအတွင်း ပင်နယ်တီ အဆုံးအဖြတ်တွေ မှာ လိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်လို့ ကျော်ကြားတာဖြစ်ပေမယ့် ကိန်းကတော့ အဆိုပါ မှတ်တမ်းကို ချေဖြတ်ပြဖို့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။
England’s striker Harry Kane scoring his team’s fourth goal, from the penalty spot, and his hatrick, during the UEFA Euro 2020 qualifying first round Group A football match between England and Bulgaria at Wembley Stadium in London on September 7, 2019. (Photo by Ben STANSALL / AFP) / NOT FOR MARKETING OR ADVERTISING USE / RESTRICTED TO EDITORIAL USE
အောင်မြင်တဲ့ ပင်နယ်တီကန်ချက်တွေ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ITV နဲ့ အင်တာဗျူး မှာကိန်းက – ” ပင်နယ်တီ တွေ ကောင်းကောင်း ကန်သွင်းနိုင်ဖို့ ဆိုရင် အလုပ်ကြိုးစားဖို့ နဲ့ လေ့ကျင့်မှုတွေများများလုပ်ဖို့ ပဲလိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာဒီလို လေ့ကျင့်မှုတွေကို အခုတပတ်လုံးနဲ့ ပွဲမတိုင်မီ နေ့ တွေအထိ ပြုလုပ်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
လေ့ကျင့်မှုတွေမှာ ပင်နယ်တီ ဘယ်နှလုံးဝင်အောင်ကန်မယ်ဆိုတာ ခံစားချက်အပေါ်မူတည်ပါတယ်။၁၀ လုံးဖြစ်နိုင်သလို အလုံး ၅၀ လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အသင်းမှာ နည်းစနစ်ကျွမ်းကျင်ပြီး မြန်နှုန်းမြင့်တဲ့ ကစားသမားတွေအများကြီးရှိလို့ ပင်နယ်တီတွေကတော့ရနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်” လို့ပြောသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂလန် အသင်း ယမန်နေ့ည ပွဲစဉ်ပထမပိုင်းမှာ အကောင်းဆုံး ခြေစွမ်းမျိုး မပြသနိုင်ခဲ့သလို ၁၁ယောက်လုံး ပိတ်ကစားတဲ့ ဘူလ်ဂေးရီးယားတို့ကြောင့် အခက်တွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် ပွဲအပြီးမှာရလဒ်ကောင်းရဖို့အတွက် ကြိုးစားသွားခဲ့ကြတယ်လို့ ကိန်းကဆိုပါတယ်။
” ပွဲချိန် ပထမပိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ အသင်း ရဲ့ တိုက်စစ်ဆင်မှုတွေ ဟာအကြိမ်အများကြီး အပျက်များခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်း ပထမပိုင်းအပြီးမှာပိုကြိုးစားဖို့ အတွက် အားလုံးက ပြောဆိုဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းအစမှာပဲဂိုးရသွားခဲ့လို့ အခုလို လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တခုကို ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး အင်္ဂါနေ့ ပွဲစဉ်အထိဒါကို သယ်ဆောင်သွားနိုင်မယ် လို့ လည်း မျှော်လင့်မိပါတယ် ” လို့ပြောသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂလန် အသင်းဟာ လာမယ့် ပွဲစဉ်အဖြစ်တော့ အုပ်စုတွင်းရှုံးပွဲမရှိထားသေးသလို ပုံစံကောင်းပြနေတဲ့ ကိုဆိုဗို အသင်းနဲ့ ရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိန်းက – ” သူတို့ အသင်းကို ပိုပြီးကောင်းကောင်းဖိအားပေးကစားထားနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။လွယ်တော့လွယ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ဟာ ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲမှာ ဒီနေ့ ပွဲလို ဦးဆောင်နိုင် ပြီးနောက်ထပ် ရလဒ်ကောင်း ရရှိမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ကလပ်အသင်းက ခြေစွမ်းကောင်းကို နိုင်ငံ အသင်းအထိသယ်လာနိုင်တဲ့ စတာလင်အတွက်ကတော့ တကယ်ကောင်းပါတယ်။
သူဟာ အံ့မခန်းကစားသမားကောင်းတဦးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာ သူ့ရဲ့ သွင်းဂိုးကို ပြန်ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူနဲ့ အတူ တွဲဖက်ကစားရတာကို ပျော်ရွှင်နှစ်သက်ပါတယ်။တသင်းလုံးကလည်း အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ် ” လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
အောငျမွငျတဲ့ပငျနယျတီကနျသှငျးမှုတှရေဲ့ နောကျကှယျကလြှို့ဝှကျခကျြကို ပွောပွလိုကျတဲ့ #ဟယျရီကိနျး
ဝငျဘာလေ မှာ ကစားသှားခဲ့တဲ့ ယူရို ၂၀၂၀ ခွစေဈပှဲစဉျ မှာ အင်ျဂလနျ အသငျးက ဘူလျဂေးရီးယား အသငျးကို ၄-၀ ဂိုးနဲ့ အနိုငျယူပွီး အမှတျပေးဇယားကို ဆကျလကျ ဦးဆောငျသှားနိုငျခဲ့ပါတယျ။ဒီပှဲမှာ အထူးခွစှေမျးပွခဲ့တာကတော့ တိုကျစဈမှူး ဟယျရီကိနျးဖွဈပွီး ကိုယျတိုငျ ဟတျထရဈသှငျးယူနိုငျခဲ့သလို စတာလငျရဲ့ဂိုးကိုလညျးဖနျတီးပေးနိုငျခဲ့ပါတယျ။
အင်ျဂလနျ အသငျးဟာ အုပျစုတှငျး ပှဲစဉျ ၃ပှဲအပွီးမှာ ရာနှုနျးပွညျ့ အနိုငျရရှိထားခဲ့လို့ လညျး ခွစေဈပှဲအောငျမွငျဖို့ အတျောလေးကို အခွအေနကေောငျးနပွေီဖွဈပါတယျ။ဟယျရီကိနျးဟာ အခုပှဲစဉျမှာ သှငျးယူနိုငျခဲ့တဲ့ဂိုးတှကွေောငျ့ နိုငျငံအသငျးအတှကျ သှငျးဂိုး၂၅ဂိုးအထိရှိလာခဲ့ပွီလညျးဖွဈပါတယျ။
အခုပှဲကသူ့ရဲ့ သှငျးဂိုးတှပေငျနယျတီသှငျးဂိုး ၂ဂိုးအထိပါဝငျခဲ့တာဖွဈပွီး ကိနျးအတှကျ တော့ အင်ျဂလနျအတှကျ နောကျဆုံး ပငျနယျတီ ၈ကွိမျလုံးကို အဖိတျအစငျ မရှိအောငျအသုံးခထြားနိုငျခဲ့တာလညျးဖွဈပါတယျ။အင်ျဂလနျကစားသမားတှဟော အတိတျကာလတှအေတှငျး ပငျနယျတီ အဆုံးအဖွတျတှေ မှာ လိုအပျခကျြတှရှေိတယျလို့ ကြျောကွားတာဖွဈပမေယျ့ ကိနျးကတော့
အဆိုပါ မှတျတမျးကို ခဖြွေတျပွဖို့ရှိနတောဖွဈပါတယျ။
အောငျမွငျတဲ့ ပငျနယျတီကနျခကျြတှေ နဲ့ ပတျသကျပွီး ITV နဲ့ အငျတာဗြူး မှာကိနျးက – ” ပငျနယျတီ တှေ ကောငျးကောငျး ကနျသှငျးနိုငျဖို့ ဆိုရငျ အလုပျကွိုးစားဖို့ နဲ့ လကေ့ငျြ့မှုတှမြေားမြားလုပျဖို့ ပဲလိုပါတယျ။ကြှနျတျောတို့ဟာဒီလို လကေ့ငျြ့မှုတှကေို အခုတပတျလုံးနဲ့ ပှဲမတိုငျမီ နေ့ တှအေထိ ပွုလုပျနခေဲ့ကွတာဖွဈပါတယျ။
လကေ့ငျြ့မှုတှမှော ပငျနယျတီ ဘယျနှလုံးဝငျအောငျကနျမယျဆိုတာ ခံစားခကျြအပျေါမူတညျပါတယျ။၁၀ လုံးဖွဈနိုငျသလို အလုံး ၅၀ လညျးဖွဈနိုငျပါတယျ။ကြှနျတျောတို့အသငျးမှာ နညျးစနဈကြှမျးကငျြပွီး မွနျနှုနျးမွငျ့တဲ့ ကစားသမားတှအေမြားကွီးရှိလို့ ပငျနယျတီတှကေတော့ရနဦေးမှာဖွဈပါတယျ” လို့ပွောသှားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
အင်ျဂလနျ အသငျး ယမနျနညေ့ ပှဲစဉျပထမပိုငျးမှာ အကောငျးဆုံး ခွစှေမျးမြိုး မပွသနိုငျခဲ့သလို ၁၁ယောကျလုံး ပိတျကစားတဲ့ ဘူလျဂေးရီးယားတို့ကွောငျ့ အခကျတှခေဲ့ရတာဖွဈပါတယျ။ဒါပမေယျ့ ပှဲအပွီးမှာရလဒျကောငျးရဖို့အတှကျ ကွိုးစားသှားခဲ့ကွတယျလို့ ကိနျးကဆိုပါတယျ။
” ပှဲခြိနျ ပထမပိုငျးမှာ ကြှနျတျောတို့ အသငျး ရဲ့ တိုကျစဈဆငျမှုတှေ ဟာအကွိမျအမြားကွီး အပကျြမြားခဲ့ပါတယျ။ဒါကွောငျ့လညျး ပထမပိုငျးအပွီးမှာပိုကွိုးစားဖို့ အတှကျ အားလုံးက ပွောဆိုဖွဈခဲ့ကွပါတယျ။ဒုတိယပိုငျးအစမှာပဲဂိုးရသှားခဲ့လို့ အခုလို လုပျဆောငျနိုငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ကောငျးမှနျတဲ့ရလဒျတခုကို ရရှိခဲ့တာဖွဈပွီး အင်ျဂါနေ့ ပှဲစဉျအထိဒါကို သယျဆောငျသှားနိုငျမယျ လို့ လညျး မြှျောလငျ့မိပါတယျ ” လို့ပွောသှားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
အင်ျဂလနျ အသငျးဟာ လာမယျ့ ပှဲစဉျအဖွဈတော့ အုပျစုတှငျးရှုံးပှဲမရှိထားသေးသလို ပုံစံကောငျးပွနတေဲ့ ကိုဆိုဗို အသငျးနဲ့ ရငျဆိုငျရဖို့ရှိနတောဖွဈပါတယျ။ဒီပှဲနဲ့ ပတျသကျပွီး ကိနျးက – ” သူတို့ အသငျးကို ပိုပွီးကောငျးကောငျးဖိအားပေးကစားထားနိုငျဖို့လိုပါတယျ။လှယျတော့လှယျမှာမဟုတျပါဘူး။
ဒါပမေယျ့ ကြှနျတျောတို့ ဟာ ကောငျးမှနျတဲ့စိတျခံစားခကျြတှရှေိနပေါတယျ။အဲ့ဒီပှဲမှာ ဒီနေ့ ပှဲလို ဦးဆောငျနိုငျ ပွီးနောကျထပျ ရလဒျကောငျး ရရှိမယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ။ကလပျအသငျးက ခွစှေမျးကောငျးကို နိုငျငံ အသငျးအထိသယျလာနိုငျတဲ့ စတာလငျအတှကျကတော့ တကယျကောငျးပါတယျ။
သူဟာ အံ့မခနျးကစားသမားကောငျးတဦးဖွဈပါတယျ။ကြှနျတျောဟာ သူ့ရဲ့ သှငျးဂိုးကို ပွနျဖနျတီးပေးနိုငျခဲ့ပါတယျ။သူနဲ့ အတူ တှဲဖကျကစားရတာကို ပြျောရှငျနှဈသကျပါတယျ။တသငျးလုံးကလညျး အတူတူပဲဖွဈပါတယျ ” လို့ပွောသှားခဲ့ပါတယျ။